घर दक्षिण अमेरिका फुटबल स्टोरीहरू ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरू फेलिप एन्डरसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो नामले चिनिन्छ "हे रटो डे रोमा"। हाम्रो फिलीप एन्डरसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाता आफ्नो बचपनको समय सम्म। विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, रिश्ते र व्यक्तिगत जीवनमा वृद्धि गर्न समावेश छ।
हो, सबैलाई थाहा छ त्यो एक छिटो, राम्रो र गोल हो, र प्राविधिक रूपमा भित्री फुटबलर हो। यद्यपि, फिलिपिन्स अन्डरसनको जीवनीमा मात्र केहि कम छ जुन धेरै रोचक छ। अब अगाडी बढो बिना, सुरु गरौं।
सुरू गर्न, उनको पूरा नाम फेलिप एन्डरसन पेरिरा गोमेक्स हो। फेलिप एन्डरसनले प्रायः भनिन्छ जुन ब्राजिलको फेडरल डिस्ट्रिक्टमा प्रशासनिक क्षेत्र सांता मारियामा अप्रिल 15 को 1993th दिनमा जन्मेका थिए। उनी आफ्नो आमा, एलिजा पेरेरा र बुबा, सेबस्टेईओ टोमे गॉम्समा जन्मेका थिए र पेर्डो ब्राजिलको राष्ट्रियता (संयुक्त, मूल, र अफ्रिकी पुष्प )सँग सम्बन्धित छन्।
अन्डरसनले तिनका दुई भाइहरू र चार बहिनीहरूसँग पिरोल्न थाले; क्यारिन, जुलियाना, साबरिना र डडेले। प्रारम्भिक, उनको गृहनगर ब्राजिलका सान्टा मारियामा बस्ने, प्रारम्भिक, फेलिप र तिनको एक-पटक मध्य-वर्ग परिवारको लागि सजिलो थिएन। लेखनको समयमा, तल धेरै फोटोमा देखा परे जस्तै परिवर्तन भएको छ।
बढ्दै गयो, फेलिप अन्डरसनका आमाबाबुले आफ्नो शिक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्थे। कुन कुराले उनीहरूलाई आफ्नो पूर्वस्कूकीबाट स्नातक गरे (शिक्षिका शिशु) फुटबल सामना गर्नुअघि एक कच्चा प्रतिभाको रूपमा आयो।
विद्यालयमा हुँदा, एन्डरसन प्रतिस्पर्धी फुटबल खेलकुद खेलकुदको दौडान मात्र खेल्न थालेको थियो। ओएफ एफ स्कूल अवधि, त्यो सडक फुटबल खेल्न जान्छ। यस अनुसार WuFC, अन्डरसनले त्यसपछि उनीहरूलाई आफ्नो उत्कृष्ट प्राविधिक कुकुरहरू सिके र सडकमा अनौपचारिक किकबाउट्सको दौडान उनीहरूको परिवारको घर घेरिए।
"मैले आफ्ना साथीहरूसँग सडकमा खेलिरहेका हुन्थे, र मलाई लाग्थ्यो कि मलाई टेक्नोलोजीमा प्रभाव पार्छ। अब म यहाँ हुँ, युरोपमा मेरा सपनाहरू सत्य हुँदैछन्, "
ब्राजिलको अवलोकन गरे, जसको सडकमा फुटबलले अन्ततः लाभांश भुक्तानी गर्यो किनभने उनी एक अकाडेमीमा प्रवेश गर्न अनुमति दिएका थिए।
पूर्व-विद्यालय शिक्षा पछि र सडक फुटबल खेल्दै 14º CPMIND, संघीय र एससीआर
Gaminha एन्डरसनको जोशले फुटबलको लागि उनको स्थानीय युवा टोलीको रोस्टरमा प्रवेश गरे Astral EC जसले उनलाई आवश्यक क्यारियर आधारलाई उसले चाहेको थियो।
आफ्नो युवा क्यारियर विकासको एक नयाँ अध्यायमा, एन्डरसनले सफल परीक्षण पछि निर्णय गरेपछि पछाडिको पालनामा पेल, जियोटो र नेमार 13 को उमेर मा पौराणिक सैंटोस क्लब मा शामिल गरेर। यस जवान प्रगतिको बारेमा बोल्दै उनले उहाँलाई धेरै चिकन क्षेत्रमा खेल्दै देखे, अन्डरसनले एक पटक भने:
"म एक पटक ग्याँस पिचमा खेल्छु, त्यसपछि भूरी घाँसमा। जब म 13 थियो म सान्टोसमा गए र जब मैले चिकन पिचहरू र एक पेशेवर सेटिङमा खेल्न थाले। "
क्लबको जूनियर टिम र उमेरको स्थानको लागि उत्साह पछि, एन्डरसनले 17 / 2010 सीजनको समयमा 2011 मा पहिलो पटक टोलीलाई पहिलो गोल गर्यो।
आफ्नो मन्टर बैठक:
आफ्नो पछिल्ला सत्रमा, एन्डरसनले स्यान्टोसमा अधिक मौका पाएका थिए भने ग्यारेन्टी जहाँ उनले नेमार सँग खेले। तपाईंलाई थाँहा थियो?… जब नेमार सान्टास मा एक शीर्ष खेलाडी को रूप मा स्थापित गर्दै थियो, जवान एन्डरसन धीरे - धीरे पहिलो स्पर्धा मा आफ्नो रास्ता बनाइयो।
अन्डरसनको सेन्टोस पहिलो टोलीको अवसर पछि घाइते भए Ganso र एलानोको गरीब रूप, जसको दुवै क्लबले छोड्यो। फेलिप एन्डरसनले ठूलो सफलता पाएका थिए किनभने उनले कोपा लिबरर्टडोर्स (दक्षिण अमेरिकाको चैंपियन्स लीग) र 20 उमेर भन्दा पहिले दुई साओ पाउलो स्टेटका शीर्षकहरू जिते।
यो प्रभावकारी उपलब्धिले उनको क्रमशः बार्सिलोना, जुर्वसस, पोर्टो र लाजियोमा प्रस्तावित चाल पायो।
असफल असफल युरोप:
31 जनवरी 2013 मा, एन्डरसनको इटालियन क्लबमा सहमत पारिएको Lazio ब्राजीलबाट आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्सको म्याद आगमनको कारण असफल भयो। एक निराश एन्डरसनले आफ्नो सपना यूरोपीय चालको लागि अर्कोमा अर्को स्थानान्तरण सञ्झ्यालको प्रतीक्षा गर्न थाल्नुभयो।
युरोपमा फेलिप एन्डरसनको स्थानान्तरण अझै फुटबल इतिहासमा सबैभन्दा पारंपरिक र चौंकाउने कुराकानी रहेको छ (लाजियोको खेलकूद निर्देश इगली टायरले भने)।
यो दावी भयो जब एन्ड्रसनको ब्राजिलका समकक्षले फुटबलमा भ्रष्टाचार को लागी आफ्नो ट्राफिक फीस साझेदारीमा बहिष्कृत रूचाइएका थिए।
एन्डरसनले लजियोमा पाँच सीजनहरू बस्न गएका थिए जहाँ उनले आफ्नो क्लास समय र समय देखाउँथे। ब्राजील प्लेलिमेन्ट कुनै व्यक्तिको रूपमा देखा पर्यो जुन जो काम आवश्यक भए पनि टोलीका समुह दलहरूको साथ immobile र साविक.
अन्डरसनको लाजियो प्रेरणात्मक कथाको शिखरमा उनले इटालियन सुपर प्याक जितेर आफ्नो टोलीलाई सहयोग गरेपछि आए।
फिलीपि एन्डरसनको अर्को प्रभावशाली उपलब्धि आरओओ ओलम्पिकमा थियो। एन्ड्रसनले ब्राजिलका ब्राजिलका साथीहरूको साथमा उनको स्वर्ण पदक जित्न सकेन। ब्राजिलका अनुसार, यो उनको जीवनको सबैभन्दा उत्तम क्षण थियो.
जब जाँदै हुदैछ:
यी उपलब्धिहरु पछि, एन्डसन एक पटक फेरि युरोपियन क्लबबाट रिपोर्ट गरिएको रुचिको विषय बनेको थियो। फेलिप एन्डरसनले आफ्नो विश्वास लाजियोसँग रहन निर्णय गरे। तथापि, उनले आफ्नो प्रबन्धकसँग बिस्तारै क्लबको साथ संदेह गर्न थाले सिमोन इन्जागी (जुन जूनियर भाइ Filippo Inzaghi)। एन्डरसन पछि पसेको थियो र प्रतिक्रियामा उनीहरूको टोलीका साथ प्रशिक्षणमा भाग लिन इन्कार गरे।
यो पनि एक समय थियो जब उनले केही गहिरो घुटने चोटको सामना गरे जसले उनलाई सेरी ए सिजनको आधा भन्दा बढी हराइरहेको थियो। यस समयमा, अन्डरसनले आफ्नो दिन लाजियो र इटालियन फुटबलको साथमा गन्ती गर्न थाले।
15 जुलाई 2018 मा, फेलिप एन्डरसनले लाजियो वेस्ट ह्यामको लागि छोड्ने निर्णय गरे जहाँ उनी एक क्लब-रेकर्ड हर्मरमा हस्ताक्षर गरे र उनीहरूको व्यवसाय-आधारित प्रेमिका एवलिन मैक्रीको धन्यवाद (उनको बारेमा धेरै जान्नको लागी उनको सम्बन्ध सम्बन्धी जीवनलाई हेर्नुहोस्).
क्लबको साथमा केहि हप्ता भित्र फेलिप एन्डरसनले संकेत देखाउन थाले कि उनी डेमिट्री पाटका लागि पश्चिम हामको प्रतिस्थापन हुन सक्थे जुन प्रशंसकको आशा छ। यो लेखनको रूपमा पुष्टि भएको छ। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
हरेक महान मानिसको पछि, एक ठूलो महिला छ, वा यसो भन्दै जान्छ। र लगभग हरेक सफल ब्राजीली फुटबलर पछि, त्यहाँ एलेल्लिन Machry को सुन्दर र बुद्धिमान व्यक्तिमा ग्लैमरस वाग छ।
सत्य भनिएको छ! फेलिप र एवलिनको मिठो रोमान्स भनेको हो कि उनीहरूको प्रेम जीवनको नाटक-मुक्त हो भन्ने तथ्यले सार्वजनिक आँखको जाँचबाट बचाउँछ र तिनीहरूको क्यारियर एक-अर्काको पूरै हुन्छ।
तपाईंलाई थाँहा थियो?... Evelyn Machry एक बुद्धिमान प्रेमिका हो जुन जिमको साथ मन पराएको छ। तिनीसँग व्यावसायिक अध्ययनमा परास्नातक र ब्राजील साओ पाउलोबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्नातक छ। एभलीन आफ्नो फुटबल अनुबंध र ट्रांसफर्स वार्ताको एक पेशेवर हो जसको उनको प्रेमीसँग उनको नम्बर 1 क्लाइन्टको रूपमा हो।
ब्राजिलका मिडफिल्डर अन्डरसनले सधैँ आफ्नो प्रेमिकालाई आफ्नो क्लबको सम्झौता र आर्थिक सम्बन्धमा बदल्छन्।
वार्तालाप व्यवसायको पक्षमा, एभलीन मचरी पनि बिकिनी महिला हो जुन उनको प्रेमीको इन्स्टाग्राम प्रोफाईलबाट देखा पर्यो जुन यसको बिकनी र समुद्री किनारमा छरिएको छ। एवलिन मित्रीले प्राय: आफैंको तस्वीरहरु बिकिनीमा छुट्टै र छुट्टीमा र जिममा काम गर्दै गर्दा पोष्ट गर्छ। प्रायः प्रशंसकहरूको लागि, त्यो न्युयोटोटेटर भन्दा ठुलो समुद्रतट बेब हो।
फेलिप एन्डर्सनको व्यक्तिगत जीवन जान्नको लागी तपाईंलाई तिनको पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
तपाईले फिलीपि एन्डर्ससनको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा कुरा नगरीकन आफ्नो प्रेमिकाको उल्लेख नगरी, परिवार र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनको कुत्ते जसले तिनी र एवलिन जस्ता खेलको बारेमा जान्दछ।
धर्म तथ्य - येशूलाई प्रेम गर्नुहोस्:
नैमर जस्तो, एन्डर सुसमाचार संगीतलाई माया गर्छ जसले आफ्नो बलियो ईसाई धार्मिक धारणाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। जस्तो कि तल उनको Instagram पोस्ट बाट देखा पर्यो।
यहाँ अर्को फोटो तथ्य हो जो फेलिप एन्डरसनको बलियो धार्मिक विश्वासलाई प्रमाणित गर्दछ।
एक खेल प्रेमी:
एन्डरसन एक एकल ग्यामर हो जसले आफैले खेल्न चाहन्छ। 20 मा एक कमेन्ट हुनु भनेको यसको धेरै सम्भावना लामो समयमै खेलको साथमा प्रेममा गिरिएको छ। अन्डरसनको गेमिंगको सम्बन्ध सान्टोसमा आफ्नो समयमा सुरु भएको हुनुपर्छ।
पुरानो-फैशनेबल संगीत प्रेमी:
ब्राजीलको रगतले उसको रिटहरूमार्फत दौडिरहेको छ, फुटबल स्टारले उनको फुटबलको रूपमा सङ्गीतलाई सुने। चाँडो प्रतिभा पुरानो हुन्छ किनकि उसले सुन्न 'Sertanejo', जो लोकप्रिय लोकप्रिय शैली हो र शुरुआती 1920s मा ब्राजीलियन गीतकारहरु द्वारा गाईयो।
साथै, फेलिप साम्बा को एक सा को नृत्य मा व्यस्त छैन या उनको टीम संग प्रशिक्षण, त्यो गिटार बजाता छ जो उनको अर्को कौशल हो।
फेलिप एन्डरसनको लागि, समाजमा फर्किनु महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ सोसाइटीले युवा फुटबलरहरूलाई त्यही सडकमा लागू गर्यो, उहाँले आफ्नो फुटबल यात्रा सुरु गर्नुभयो। यो कार्यहरूले दया, मानवता र प्रशंसाको भावको गहिरो भावनालाई प्रकट गर्दछ।
फेलिप एन्डर्सनको परिवारको लागि एक हार्दिक पल:
लाजियोमा आफ्नो उत्कृष्ट क्षण हुँदा, फेलिप एन्डरसनले एक पटक घरबाट खराब खबर पाए। रिपोर्टहरू आइपुग्यो कि ब्राजिलका सांता मारियामा भएको घटनामा दुई जना आत्महत्याको लागि तिनका बुबा सेबस्टेईओ टोमे गमोहरू पक्राउ गरेको थियो।
ब्राजिलका प्रेस नोटिसियसका अनुसार यो अपराध ट्राफिक दुर्घटनामा भएको थियो जब एन्डरसनका बुबा गोम्सले आफ्नो गाडीलाई बाइकमा बसिरहेको ब्रुनो सान्तोस सिल्भालाई ठक्कर दिए। उनी घाउहरूको प्रतिरोध गर्न सकेनन् त्यसैले उनी मर्नु भन्दा पहिले संघर्ष गरिरहेकी थिइन। देखिन्छ यो देखिन्छ, यो मामला बाहिर मिलाइएको छ र पीडितको परिवार बसोबास।
भयानक समाचार पालन गर्दा, फेलिप एन्डरसनको परिवारले एकता, शान्ति अनि आनन्द छोटो कहिल्यै अनुभव गरेको छैन।
तर, चीजहरू तपाईलाई थाहा छैन
आजकल धेरै खेलाडीहरू जस्तै, एंडरसनले धेरै ट्याटोहरू देखाउँछन्, यसको धेरै विशेष रूपमा उनीहरूका बायाँ हातमा हुन्छन्। उहाँको शरीरमा हरेक टटूको प्रतीक अर्थ छ जुन उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि / मूलसँग जोडिएको छ। उदाहरणको लागि, आफ्ना सबै भाइबहिनीहरूका प्रारम्भिक (चार बहिनीहरू र दुई भाइहरू) उहाँका पासाहरू र ट्रिसहरूमा भर पर्छन्। विशेष गरी एन्ड्रसनको कलाईमा, उनीसँग उनको सानो बहन डुडलीलाई समर्पित एक सानो बलरिना छ।
अर्को स्पष्ट टैटू उनको ब्राजिलको 201 रियो ओलम्पिकमा विजयी छ। जब भविष्यमा उनीहरूको क्यारियर अझै पनि प्रस्ताव गर्न चाहन्छ, यो लगभग निश्चित छ कि एन्डरसनले आफ्नो शरीरमा थप ट्याटटोको टिपोट पाउनेछ।
उनको गतिको बारेमा अनकलिक तथ्य:
धेरैले अन्डरसनलाई राम्ररी गोल गरे, र प्राविधिक रूपमा उपहार दिए मिडफिल्डर। तपाईंलाई थाँहा थियो?… एन्डरसन आधुनिक गेमको सबैभन्दा तेज खेलाडी मध्ये एक को रूपमा मानिन्छ। धेरै फाईदा प्रशंसकहरू जो छिटो खेलाडीहरू प्राप्त गर्न मनपर्छ एन्ड्रसनले क्यारियर मोडमा मन पराए।
अन्तमा, एन्डरसनको उनका मनपर्ने फुटबल खेलाडीहरू छन् जुन ब्राजिलका पूर्व ब्राजिलका कथाहरू छन्। रोनाल्डिन्हो र रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लिमा। यसले ब्राजिलका धेरै पुरानो विद्यालय स्कुल प्रेमीलाई देखाउँछ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो फेलिप अन्डरसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।